Njengoba ugubha iminyaka engama-22 kulo nyaka, umkhosi owesekwa ikakhulu ngemali evela kuMasipala waseThekwini, uhlanganisa izimbongi zendawo kanye nezamazwe omhlaba, ezindaweni ezahlukene nasezikoleni ezizungeze iTheku, lapho Ubusuku Bokuvula nemicimbi yasebusuku izobanjelwa e-Elizabeth Sneddon Theatre.
Njengoba izinkondlo zokubongela kuyizo okugxilwe kuzo kulo nyaka, uhlelo olumatasa lweviki luhlanganisa ukwethulwa kwezinkondlo, ukufundwa kwazo kanye nokwethulwa kwezincwadi yizimbongi eziningi ezahlukahlukene njalo kusihlwa. Lo mkhosi uphinde uhlanganise noMncintiswano odumile we-Durban Slam Jam kanye nomcimbi wokuvalwa komkhosi, ohlanganisa zonke izimbongi emkhosini. Uhlelo lwasemini lubandakanya imihlangano, imihlangano yokucobelela ulwazi, imincintiswano yezinkondlo, amathuba avulelekile okuhaya izinkondlo, ubuchungechunge obenziwa emakhempasi kanye nokuvakashela ezikoleni.
'Kulo nyaka sibophele izimbongi zemikhakha ethanda ukuhlukahluka kanjalo namaphimbo amaningi,' kuchaza umsunguli we-CCA, uNksz Siphindile Hlongwa. 'Kuwo wonke umcimbi wezinsuku ezinhlanu asigcini nje kuphela ngokubungaza amaphimbo alabo abakhulumayo nabahayayo kodwa futhi namaphimbo abesifazane. Uma sicabanga indlela umhlaba ogxile ngayo kudlame nokuhlukumeza okubhekiswe kwabobulili obuthile, siqinisekisile ukuletha amaphimbo avela kuzo zonke izinkalo zomhlaba akwazi kahle ukulandisa ngosizi lwabahlukumezekile.'
Izimbongi ezingamashumi amabili nanye ezivela kuyo yonke le ngabadi zizohlanganyela emkhosini walonyaka. Izihambeli zamazwe ngamazwe zibandakanya uMiriam Cano, umbhali wolimi lwesi-Catalan, intatheli kanye nomshicileli wase-Barcelona, e-Spain; Umlandisi wezindaba waseMalawi nombhali wamaqoqo amabili ezinkondlo u-Upile Chisala; Imbongi yoMtswana engumculi nomqondisi wezobuciko u-TJ Dema; Umbhali wase-Antigua-naseCanada, umsunguli, umlingisi, uthisha wezobuciko nomqondisi we-The Banff Centre Spoken Word Program, uTanya Evanson; UPhilip Meersman wase-Belgium oyimbongi ekhuluma izilimi eziningi nongumculi; UDaniel Summerhill imbongi yaseMelika futhi engumculi; URafeef Ziadah imbongi yasePalestina kanye nesishoshovu samalungelo esintu, noDaucourt Severine wase-France osebenza emikhakheni eyahlukahlukene efana nokuhumusha, umculo kanye nezeshashalazi.
Kwabavela e-Ukraine kukhona u-Myroslav Laiuk imbongi nombhali wamanoveli omsebenzi wakhe uhunyushelwe kusiJalimani, isiNgisi, iSpanishi, isiBulgaria, isiCzech, isiPolish, isi-Azerbaijani, isiRashiya, isiLithuaniya nezilimi zaseMelika; kanye noTaras Malkovych imbongi nomhumushi osehumushe futhi washicilela iqoqo lezinkondlo zesimanje zesi-Irish ngolimi lwakhe.
AbaseNingizimu Afrika abazobe bekhona sibala umbhali osehlomule ngendondo, umethuli wezinhlelo kumabonakude, umlingisi nesishoshovu, uLebo Mashile; Imbongi yeSilo Samabandla u-Goodwill uZwelithini, u-BM Mdletshe; umbhali odumile nothandwa kakhulu, imbongi, umdlali wemidlalo, umqondisi, umculi nomlandisi wezindaba, uDkt Gcina Mhlophe; intatheli ezimele, umbhali wemidlalo, uchwepheshe wezokuxhumana kanye nomhlaziyi wemibhalo, uSandile Ngidi; umbhali owazifundisa uPhelelani Makhanya oneqoqo lezinkondlo ezishicilelwe; iciko elilandisayo, umbhali wemidlalo nomlingisi oyimbongi enezinkondlo ezishicilelwe, uVuyelwa Maluleke; UMak Manaka oneziqu zeMastazi Kwezobuciko Bokubhala eNyuvesi yase-Rhodes futhi oseqophe icwecwe lomsebenzi wakhe; UNkateko Masinga umbhali, umshicileli, iciko lomsebenzi okhulunywayo nomlingisi kwezeshashalazi; UMphutlane Wa Bofelo imbongi, umbhali wezindaba, osebenza ngezamasiko kanye nomhlaziyi wezomphakathi; UMatete Motsoaledi umbhali, umthwebuli wezithombe, umhleli kanye nomqondisi no-Emmah Mabye owethula iqoqo lakhe lokuqala lezinkondlo eMkhosini We-Poetry Africa Wama-21.
Njengomzamo wokugqugquzela nokukhuthaza izinkondlo zokubonga, lo mkhosi uzokwethula umhlangano wokucobelela ulwazi weviki lonke ozoholwa inxusa lomlando wakwaZulu nembongi yeSilo Samabandla u-Goodwill Zwelithini, u-BM Mdletshe kusukela mhla ziyisi-8 kuya kumhla ziyi-12 kuMfumfu. 'Sethemba ukuthi lo mhlangano uzoba yisiqalo seminye eminingi imihlangano yokucobelela ulwazi ebungaza amagugu ethu esizwe hhayi nje samaZulu kuphela, kodwa e-Afrika yonke,' kuchaza uHlongwa. ‘Injongo okuphokophelwe kuyona ukuba ekugcineni lokhu kuphendlele indlela nezinye izilimi eziningi zase-Afrika kulo lonke leli zwekazi.’
Uhlelo oluphelele lwe-Poetry Africa ungalubheka kuwebhusayithi ethi www.cca.ukzn.ac.za.
Amathikithi angama-R60 kubantu abadala kanye nama-R40 kwabahola impesheni nezitshudeni futhi angathengwa e-Computicket.